Maamulka Gobolka Banaadir Oo Ugu Baaqay Shirkadaha Ka Shaqeeya Nadaafadda in ay Ku biiraan Shirkadda Cusub ee ECO
Afhayeenka maamulka gobalka banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane oo wareysi siiyay goobjoog ayaa sheegay in ay shatiyadii kala laabteen shirkadihii ka shaqyn jiray nadaafadda islamarkaana ay ku wareejiyeen shirkad lagu magacaabo ECO oo uu maamulku ku ogyahay ka shaqeynta nadaafadda magaalada ayna kula xisaabtami doonaan qurxinta bilicda caasimadda soomaaliya ee Muqdisho.
Waxa uu xusay in dikareeto horay uga soo baxaday maamulka gobalka looga joojiyay shaqooyinkii ay hayeen shirkadihii nadaafadda ee ka howlgali jiray magaalada muqdisho.
“Waxaan howlihii nadaafadda ku wareejinnay shirkad wayn oo la yiraahdo Eco taas oo awood uleh in ay daboosho baahida nadaafadeed ee uu qabo goabalkani” ayuu yiri xalane.
“ Waxaan ugu baaqaynaa shirkadahii hore uga shaqayn jiray nadaafadda in ay ku biiraan shirkaddan Cusub ee ECO” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xalane.
Xalane ayaa Sidoo kale sheegay in shirkaddan ay dadka ku dhaqan muqdisho ugu adeegeyso qiimo uu ka warqabo maamulka gobolka banaadir oo aan badneen islamarkaadna ay muhiim tahay in qashinka laga nadiifiyo caasimadda.
“Shirkadan ayaanu kula xisaab tameynaa nadaafada muqdisho shirkadaha kalena waxaa looga baahanyahay in ay ku biiraan shirkadaasi si bilicada magaada ay u qur xoonaato” ayuu yiri cabdi fitaax cumar xalane.
Marka laga soo tago guryaha ay ka qaadayso qashinka waxa uu xusay Xalane in ay jirto maalmo ay shirkaddu nadiifin doonto wadooyinka caasimadda si loo bilo quruxda caasimadda.
Dhowaan ayay ahayd markii madaxwaynaha xilkiisu sii dhamaanayo ee Xasan sheikh Maxamuud uu xariga ka jaray shirkadda ECO oo ka shaqyn doonta nadaafadda iyadoo ay hore u jiraan shirkado dhowr ah oo ka shaqeeya nadaafadda,.
Shirkadahan laga laabtay ruqsadda ayaa horey cabasho uga muujiyeen go’aanka uu mamulka gobolka banaadir ugala laabtay shatiyadii ay ku shaqaynayeen wallow weli ay shaqeeyaan qaar badan oo ka mid ah shirkadahaasi.